AmaBuddha namaToa anemikhuba yenkolo yokuzehlukanisa nezindaba zezwe futhi baphile ngokuzithiba, ingabe ngalokho angathola insindiso? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Ekupheleni kwalo msebenzi, wonke amahlelo ayoba elilodwa, zonke izidalwa ziyobuyela ngaphansi kombuso woMdali, zonke izidalwa ziyokhonza uNkulunkulu oyedwa oyiqiniso, futhi zonke izinkolo mbumbulu ziyophela, futhi zingaphinde zivele.
… Ziningi izinkolo ezinkulu emhlabeni, futhi ngayinye inenhloko yayo, noma umholi, futhi abalandeli basabalele emazweni ngezifunda ezihlukene emhlabeni wonke; wonke amazwe, angaba mancane noma makhulu, anezinkolo ezihlukene ngaphakathi kwawo. Nokho, akukhathaliseki ukuthi zingaki izinkolo ezikhona emhlabeni jikelele, bonke abantu emhlabeni uhlangene namazulu ekugcineni baphila ngaphansi kokuqondiswa nguNkulunkulu oyedwa, futhi impilo yabo ayiqondiswa ikhanda noma umholi wenkolo othile. Okungukusho ukuthi isintu asiholwa inhloko noma umholi wezenkolo othile; esikhundleni salokho isintu sisonke siholwa nguMdali, owadala amazulu nomhlaba, kanye nezinto zonke, futhi wadala nesintu—futhi lokhu kuyiqiniso. Nakuba umhlaba unezinkolo eziningi ezinkulu, akukhathaliseki ukuthi zinkulu kangakanani, zonke zikhona ngaphansi kokubuswa uMdali futhi azikho kuzona ezingadlula isilinganiso salo mbuso. Ukuthuthuka kwesintu, inqubekela phambili kwezokuhlalisana kwabantu, ukuthuthuka kwezesayensi yemvelo—ngakunye kungehlukaniswe namalungiselelo oMdali, futhi lo msebenzi akuyona into engenziwa umholi wenkolo othile. Izinhloko zezinkolo zimane zingabaholi benkolo ethile, futhi ngeke zimele uNkulunkulu noma lowo owadala amazulu nomhlaba kanye nezinto zonke. Izinhloko zenkolo zingahola bonke labo abakuleyo nkolo iyonke, kodwa ngeke zikwazi ukubusa zonke izidalwa ngaphansi kwamazulu—leli iqiniso elivunywayo emhlabeni wonke. Izinhloko zenkolo zimane zingabaholi, futhi ngeke zime zilingane noNkulunkulu (uMdali). Zonke izinto zisezandleni zoMdali, futhi ekugcineni zonke ziyobuyela ezandleni zoMdali. Isintu senziwa nguNkulunkulu ekuqaleni, futhi akukhathaliseki inkolo, wonke umuntu uyobuyela ngaphansi kokubuswa nguNkulunkulu—lokhu akunakugwemeka. UNkulunkulu kuphela okunguye oPhezukonke phakathi kwezinto zonke, futhi umbusi ophakeme kunabo bonke phakathi kwezidalwa zonke kufanele naye abuyele ngaphansi kokubusa Kwakhe. Noma ngabe isikhundla somuntu siphakeme kangakanani, ngeke akwazi ukuletha isintu esiphethweni esifanele, futhi akekho okwazi ukuhlela zonke izinto ngohlobo lwazo. UJehova Uqobo Lwakhe owadala isintu futhi wasihlela ngohlobo, futhi uma isikhathi sokuphela sifika uyokwenza umsebenzi Wakhe Uqobo Lwakhe, ehlela zonke izinto ngohlobo lwazo—futhi lokhu ngeke kwenziwe inoma ubani ngaphandle kukaNkulunkulu. … ngoba emhlabeni jikelele kukhona lo Nkulunkulu oyedwa kuphela, futhi azikho ezinye izinkolo. Ongazange awudale umhlaba ngeke akwazi ukuwufikisa ekugcineni, kepha Lowo owadala umhlaba ngokuqinisekile uzowufikisa ekugcineni, ngakho uma umuntu engakwazi ukuletha inkathi esiphethweni futhi amane esiza umuntu ukuthi alungise umqondo wakhe, impela ngeke abe uNkulunkulu, futhi ngokuqinisekile ngeke abe yiNkosi yesintu. Ngeke akwazi ukwenza umsebenzi omkhulu kanjalo; munye kuphela ongenza lo msebenzi onjalo, futhi bonke labo abangakwazi ukwenza lo msebenzi ngokuqinisekile izitha ngaphandle kwaNkulunkulu. Uma beyinkolo-ze, abahambisani noNkulunkulu, futhi uma bengahambisani noNkulunkulu, ngakho bayizitha zikaNkulunkulu. Wonke umsebenzi wenziwa yilo Nkulunkulu oyedwa oyiqiniso, kanti nomhlaba wonke nezulu lonke likhuzwa ngulo Nkulunkulu oyedwa.
Uma nje izwe elidala lisekhona, ngizokwehlisela intukuthelo Yami ezizweni zalo, ngenze imbulunga yonke yazi imithetho Yami yokuphatha, futhi ngisole noma ubani oyiphulayo:
Njengoba ngiphendulela ubuso Bami embulungeni ukuba ngikhulume, wonke umuntu uyalizwa izwi Lami, futhi abone yonke imisebenzi engiyenzile embulungeni yonke. Labo abaphikisana nentando Yami, okusho ukuthi, abaphikisana Nami ngokwenza imisebenzi yabantu, bazowela ekusoleni Kwami. Ngizothatha izinkanyezi ezingenakubalwa zamazulu ngizenze kabusha, futhi ngenxa Yami ilanga nenyanga kuzovuselelwa isibhakabhaka ngeke sisaba yilokho ebesiyikho; okuningi okusemhlabeni kuzovuselelwa. Konke kuzophelela ngamazwi Ami. Izizwe eziningi ezisemhlabeni zizohlukaniswa kabusha futhi zithathelwe indawo yisizwe Sami, ukuze izizwe eziphezu komhlaba zishabalale phakade futhi zibe yisizwe esikhonza Mina; zonke izizwe zomhlaba zizobhujiswa, futhi ngeke zisaba khona. Ebantwini abasemhlabeni, bonke labo abangabakasathane bazoqothulwa; bonke abakhonza kuSathane bazofakwa ekujuleni komlilo Wami ovuthayo—okusho ukuthi, ngaphandle kwalabo manje abasendleleni ewumngcingo, bonke abanye bazophenduka umlotha.
Okwedlule：Ngokombono wami, zonke izinkolo zifundisa isintu ukuba silunge. Ingabe lokho kusho ukuthi kungakhathalekile ukuthi iyiphi inkolo isintu esiyilandelayo, kuphela nje uma siqotho futhi singenzi izenzo ezimbi sizothola insindiso?
Okulandelayo：Abantu bavame ukuthi, “Ubuhle bunomvuzo wakho, ububi ukujeziswa kwakho,” khona-ke kungani uNkulunkulu engasusi bonke abantu ababi?